Kudingeka sibambisane ukuze sinqobe - u-Bavuma
Captain Faf du Pleases of South Africa and Temba Bavuma of South Africa during day 4 of the 1st Sunfoil Test match between South Africa and Bangladesh at Senwes Park on October 01, 2017 in Potchefstroom, South Africa. (Photo by Sydney Seshibedi/Gallo Images)
Abaphosela ama-Standard Bank Proteas balungele ukudlala ngokubambisana ukuthola ama-wicket ayisikhombisa ukuze anqobe ngosuku lokugcina lomdlalo wokuqala we-Sunfoil Test bedlala ne-Bangladesh e-Senwes Park e-Potchefstroom. Ukulimala kuka-Morne Morkel, yinto embi, kanye nesimo sezulu esingacacile asilindelekile kungahlupha ngosuku lokugcina.
Odlala umdlalo wakhe wokuqala, u-Andile Phehlukwayo, usanendima ebalulekile okusamele ayidlale nge-innings yesibili, emuva kokudlala kahle kuma-overs ayisithupha wathola i-Test wicket yakhe yokuqala ngokukhipha umdlali omkhulu, u-Tamim Iqbal, kwi-innings yokuqala. Ashayela ama-Proteas, u-Temba Bavuma, uyathemba ukuthi u-Phehlukwayo kanye nabanye abaphosayo banomfutho omningi wokuthi bathole umdlalo omuhle ngokunqoba.
“u-Andile ungene kahle eqenjini, akezwa sengathi umdlalo wakhe wokuqala,” kusho u-Bavuma emuva komdlalo wangeSonto. “Uma ubheka i-wicket kanye nendlela edlalengayo, uzodlala indima enkulu kwi-innings yesibili. Sibonile ukuthi angenzani kwi-innings yokuqala, ubathulisile abashayayo. Njengoba kukhona i-variable bounce kanye nemigqa eqondile ayiphosayo, uzodlala kahle.”
“Sishayekile,” ekhuluma ngokulimala kuka-Morkel. “u-Morne uhola abaphosayo futhi ebevutha ngalesa sikhathi. Ngenhlanhla sinabadlali abakhona, nami ngizoletha okwami kokuphosa kusasa. u-Andile, u-Keshav, u-KG no-Duanne bayakwazi ukuphakamisa izandla balenzele kahle iqembu.”
Ekuqaleni, u-faf du Plessis (81) no-Bavuma (62) bahlanganise i-partnership yama-runs angu-142 nge-wicket yesine ukucacisa izinto kanye nenhloso yokusondela ekunqobeni, kodwa kwaphinda kwakhanyisa ngekhono lika-Bavuma lokudlala.
u-Bavuma wanyuselwa ekushayeni ku-No. 4 kumdlalo wokugcina we-Test kudlalwa ne-England e-Manchester, futhi ngathi usengene kahle kuleyandawo, lapho ene-average engu-53.33. Uthi i-innings yakhe iholwa isikhathi emdlalweni, futhi wangenela ezinhlobo zokushaya kwakhe nashaya nabo, u-Hashim Amla no-Faf du Plessis.
“Ngizama ukudlala isimo somdlalo ngendlela engiyaziyo,” ekhuluma ngokushaya kwakhe. “Ngingena izolo, besilahlekelwe ama-wicket amabili, ngizwe sengathi umsebenzi wami ukuzama kanye nokufikisa iqembu ekupheleni kosuku. Ngizamili ukuthola ama-runs kanye nokuzama ukusibeka endaweni enhle. Namhlanje iqembu belifisa ukufika kwisidlo sasemini, umcabango wami kube ukufika kwisidlo sasemini, bengazi ukuthi ama-runs azofika.”
“Ukushaya no-Faf no-Amla, ngicabanga ukuthi ngithanda indlela abashayangayo,” esho echaza. “u-Amla phezulu kweqembu kanye nesimo somdlalo, bazame ukuwumisa kahle umdlalo ukuze basibeke endaweni enhle. Ngesikhathi kungena u-Faf, ufike nomdlandla kanye nobunzima, futhi ngazama ukuthathela kuyena. Ngiyakuthanda ukushaya no-Hash no-Faf.”
u-Morkel uthole i-left side strain negsikhathi ephosa kwi-over yakhe yesithupha kwi-spell futhi uhlulekile ukuqhubeka nokuphosa kulandela usizo kanye nokubhekwa. Uzohanjiselwa ama-scans ngoMsombuluko ekuseni ukwazi ukuthi ulimele kangakanani.
Ama-Proteas adlule ekubuyiselweni emuva kabili ukuphushela ukunqoba -Bangladesh yenza ama-Proteas akusebenzele ukuba ngaphambili kwi-innings yokuqala u-Amla no-Elgar baqinisa isibambo sama-Proteas kwi-Test yokuqala Nganelisekile ngo-97 - u-Markram u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs Ama-Proteas afuna ukunqoba ama-Test – Rabada uMarkram uzodlala umdlalo wakhe wokuqala kwi-Test series ne-Bangladesh i-Faf du Plessis uzohola ama-Proteas kuma-format amathathu i-CSA iqoka u-Ottis Gibson njengomqeqeshi wama-Proteas -Moeen Ali uphosela i-England ukuthi inqobe i-series Ama-Proteas ahlala egxilile ekuqedeni kahle uhambo